Group-ka D ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 oo caawa la soo gabagabeeyey …+ SAWIRRO – Gool FM
Group-ka D ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 oo caawa la soo gabagabeeyey …+ SAWIRRO
(Qahira) 01 Luulyo 2019. Waxaa caawa la soo gabagabeeyey Group-ka D ee koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019, iyadoo xulalka Morocco iyo Ivory Coast ay u soo baxeen wareega 16-ka ee Tartankan.
Xulka qaranka Ivory Coast ayaa wuxuu 4-1 kaga adkaaday dhigooda Namibia, kulankooda 3-aad ee Group-ka D, koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019, oo si habsami leh uga socda Magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar oo sanadkan iyagu ay marti-gelinayaan tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka Ivory Coast.
Daqiiqadii 39-aad ee ciyaarta Max-Alain Gradel ayaa hogaanka u dhiibay Xulkiisa qaranka Ivory Coast, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Franck Kessie.
Daqiiqadii 58-aad xiddiga xulka qaranka Ivory Coast ee Geoffroy Serey Die ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0, wuxuuna caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Jean-Philippe Gbamin.
71 daqiiqo Joslin Kamatuka ayaa neefta ku soo celiyay xulkiisa Namibia, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1.
Balse daqiiqadii 84-aad, Wilfried Zaha ayaa niyadjabiyay taageerayaasha xulka qaranka Namibia kaddib markii uu ciyaarta ka dhigay 3-1, waxaana goolkan markale caawiyay Franck Kessie.
89 daqiiqo xulka qaranka Ivory Coast ayaa waxay Heleen goolkoodii 4-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay Maxwel Cornet, iyadoo caawintii seddexaad ee kulankan uu sameeyay Franck Kessie oo ciyaartan ka noqday boqorka caawinta.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhaamatay 4-1 iyadoo uu xulka qaranka Ivory Coast uu Group-ka D kaga soo bxay kaalinta 2-aad, halka Morocco ay ku soo baxeen kaalinta 1-aad, waxayna u gudbeen wareega xiga ee 16-ka ee koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019.
Dhinaca kale ciyaarta dhex martay xulkalka South Africa iyo Morocco ay ku soo idlaatay 1-0 ay guusha ku raacday wiilasha matalayay South Africa, iyadoo daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta uu u dhaliyay ciyaaryahankooda Bongani Zungu.
Waxaa xusid mudan in xulalka South Africa iyo Namibia ay gabi ahaanba isaga hareen koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019.